Nisy nahita tany amin’ny mariazy: nafindra eny Antanimora ary hotsaraina i Claudine | NewsMada
Araka ny loharanom-baovao, nisy nahita tamin’ny lanonam-pianakaviana (mariazy) iray ilay mpandraharaha, Razaimamonjy Claudine, ny asabotsy lasa teo. Nafindra eny Antanimora avy hatrany ny tenany taorian’izany.
Nambaran’ny loharanom-baovao fa nandray fanapahan-kevitra sy fepetra ny tompon’andraikitra ka namerina azy eny amin’ny fonjan’ny vehivavy eny Antanimora, ny alin’ny talata teo tokony ho tamin’ny 11 ora alina. Efa nohazonina teny ihany izy nialoha ny namindrana azy tany Manjakandriana, saingy noho io tranga ion y anton’izao fepetra izao. Fantatra koa fa hiakatra fitsarana ny tenany amin’ny herinandro ho avy io. Anisan’ny maha voarohirohy azy ny resaka kolikoly amin’ny tsenam-baro-panjakana.
Afa-bela ireo “olobe” na tompon’andraikitra sasany
Nafahana madiodio amin’ny raharaha iray tany amin’ny kaominina Ambohimahamasina, Ambalavao, Razaimamonjy Claudine, saingy mbola misy vesatra maromaro iahiahiana azy koa anefa ka izao hiakarany fitsarana izao.
Niteraka tsy fahafaliana ho an’ny ankamaroan’ny fikambanana maromaro na ny mpiandany aminy izao raharaha izao satria afa-bela sy tsy mba voatohintohina mihitsy ireo “olobe” sy tompon’andraikitra ambony isan’ambaratongany nanome alalana na ahina ho niray tendro taminy momba ny volam-panjakana antapitrisany maro voahodinkodina.
Araka izany, andrasana indray ny fotoam-pitsarana azy.